Uhuru Kenyatta oo Dhaliilay Xildhibaanada Cusub ee Kenya - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Uhuru Kenyatta oo Dhaliilay Xildhibaanada Cusub ee Kenya
Uhuru Kenyatta oo Dhaliilay Xildhibaanada Cusub ee Kenya
August 25, 2017 August 25, 2017 Cali Yare513
Waa arrin laga xishoodo in Xildhibaanada Baarlamaanka ay muujiyan sida ay u yihiin kuwo isla weyn, ka hor inta aan xitaa xafiiska loo dhaarin. Waa inaanu fahamnaa in naloo diray inaan dadka u shaqayno, balse aan loo baahnayn inaan ka faa’iideysano.” Ayuu yiri Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Madaxweyne Kenyatta, ayaa cadeeyay ka madaxweyne ahaan inuu taageersan yahay soo jeedintii Guddiga SRC, oo ahaa in la yareeyo mushaaraadka ay qaataan masuuliyiinta dowladda.
“Waxaan rabaa inaan si cad oo daah saarnayn u sheego, waxaan si buuxdo u taageersanahay soo jeedinta Guddiga SRC, ee ku aadan mushaar yaraynta, kaa oo yaraynaya mushaaraadka masuuliyiinta dowladda, oo ka soo bilaabanaya min madaxweyne illaa halka ugu hooseysa.” Ayuu yiri Madaxweyne Kenyatta.
Kenyatta, ayaa yiri “Waxaan ugu baaqaya Xildhibaanada sharafta leh, haddii ay doonayan in ereygaasi loogu yeero inay ixtiraamaan yaraynta mushaaraadka. Waxaan idin sheegaya aniga oo weli sugaya amarka Maxkamadda Sare, oo xitaa haddii ay xukunto, waxaan idiinku dhaaranaya inaanan marnaba saxiixi doonin sharcigaasi.
Wararkii ugu dambeeyey Xaaladda Siyaasadeed Galmudug.